IBC 2019: TVU ကွန်ယက်များ၏တိမ်တိုက်အခြေပြု TVU Talkshow သည်ဗွီဒီယိုနှင့်ပရိသတ်များပါ ၀ င်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပထမဆုံး All-In-One ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုအဖြေဖြစ်သည် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC 2019: TVU ကွန်ရက် '' တိမ်တိုက်-based TVU Talkshow ဗီဒီယိုနှင့်အတူပရိတ်သတ်ပါဝင်လာ Enable ဖို့ပထမဦးစွာ All-In-One ကို Multi-ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်
IBC 2019: TVU ကွန်ရက် '' တိမ်တိုက်-based TVU Talkshow ဗီဒီယိုနှင့်အတူပရိတ်သတ်ပါဝင်လာ Enable ဖို့ပထမဦးစွာ All-In-One ကို Multi-ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်
ဘာစီလိုနာ, စပိန် - စက်တင်ဘာလ 3, 2019 - လာမည့်မှာ IBC စက်တင်ဘာလအတွင်း (နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း), TVU ကွန်ယက်ဗီဒီယိုပရိသတ်ကိုပါဝင်မှုဖွကြောင်း Multi-ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံး All-In-One ဖြေရှင်းချက် - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သည်လုံးဝ cloud-based TVU Talkshow မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ TVU ကွန်ယက် အဆိုပါ TVU Talkshow ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ခန်းမ2အတွက် RAI ညီလာခံ Center မှာတိုက်ရိုက်ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၎င်း၏အပြည့်အဝမျဉ်းကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်, IBC စဉ်အတွင်း B28 ရပ်။
ဗီဒီယိုနှင့်အတူ real-time ပရိတ်သတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး
TVU Talkshow Real-time အတွက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တည်ခင်းဧည်ပြပွဲနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ပရိသတ်များအားဖွင့်, bi-directional ပရိသတ်ကိုပါဝင်မှုထောက်ခံပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်က၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ရှိ TVU Talkshow app ကို အသုံးပြု. ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ပါတယ်။ TVU Talkshow ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံခေါ်ဆိုသူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပေါငျးတို့သခေါ်ဆို-screen ကို pre မှထုတ်လုပ်သူများနိုင်ပါတယ်။ TVU Talkshow ကိုလည်းအချင်းချင်းညှိနှိုင်းခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်, ထုတ်လုပ်မှုသင်္ဘောသားများနှင့်ကင်မရာကိုအော်ပရေတာရဲ့ရှိမရှိထိရောက်သောနှင့်စပ်ရာမရှိသောဆက်သွယ်ရေးသေချာစေရန် IFB စီမံခန့်ခွဲမှုထောက်ခံပါတယ်။
တပြိုင်နက်တည်း Multi-Platform Delivery နှင့် Professional ကဂရစ်ဖစ်ပံ့ပိုးမှု
ဖြေရှင်းချက်မိုဃ်းတိမ်၌လုံးဝအခြေခံသည်နှင့်အမျှမျှဝါယာကြိုးလိုအပ်သောနှင့်စစ်ဆင်ရေးဝဘ်ဘရောက်ဇာကနေ operated နိုင်တဗဟိုမှ GUI ကိုအတူရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်ရှိသေး၏။ TVU Talkshow တစ်ပြိုင်နက်မှတဆင့် TVU Grid အပေါ်တကမ္ဘာလုံးထိုကဲ့သို့သော Facebook မှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် YouTube ကိုတိုက်ရိုက်, သင့်ရွေးချယ်မှု၏ CDN သို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာများကဲ့သို့လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအဖြစ်မျိုးစုံနေရာများ, ၎င်း, 3000 အဓိကတီဗီဘူတာကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူအဖြစ်အစဉ်အလာ SDI output ကိုလို့ရပါတယ် တစ်ဦး TVU လက်ခံ။
ထို့အပွငျ TVU Talkshow TVU ပွင့်လင်း API ကိုမှတဆင့်သူတို့ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတတိယပါတီဖွပေးသောအိတ်ဖွင့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုဃ်းတိမ်ကို-အခြေပြုအတူပေါင်းစည်းမှု Singular.live အိုင်ပီဂရပ်ဖစ်ပလက်ဖောင်း, မည်သည့်တည်နေရာမှထုတ်လုပ်သူရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဆင့်မြင့် Real-time ဂရပ်ဖစ် overlay ကိုစွမ်းရည်ပေးပါသည်။
"စျေးကွက်အပေါ် TVU Talkshow တူသောဘာမျှအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်," ဒါဝိဒျ Jorba, အမှုဆောင်ဒုသမ္မတ, ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဥရောပကပြောသည် TVU ကွန်ယက်။ "ဒါဟာဗီဒီယိုန့်အသတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပရိသတ်ကိုပါဝင်မှုကိုထောကျပံ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ပထမဦးဆုံး cloud-based Multi-ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။ "
"TVU Talkshow modular ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူမြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် All-In-One ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော frame ကိုတိကျမှန်ကန်ထပ်တူနည်းပညာအဖြစ်မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာ၏နံပါတ်ပေါင်းစပ်ပြီး, TVU Talkshow ဘယ်နေရာကနေမဆို TVU ၏ cloud-based ပလက်ဖောင်းကိုရယူသုံးတစ်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဖို့ထုတ်လုပ်သူများဖွ, အများဆုံးအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်တစ်ဦးအကျိုးရှိစွာလစာ-for-သောအရာကို-you-အသုံးပြုမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ မော်ဒယ်။ "
H.265 encoding ကအတူ embedded နှင့်မူပိုင်ခွင့်ဂီယာ algorithm ကို + ဖြစ်ပါသည်, ပရိသတ်တွေအပြည့်အဝတိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ် HD ဘယ်နေရာမှာမဆို၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. မှဗီဒီယို - ကလူစည်ကားအားကစားကွင်း, တောင်တန်းနိုင်ငံရပ်ခြားသို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ရွေ့လျားမော်တော်ယာဉ်ဖြစ် - စတူဒီယိုနှင့်တိုက်ရိုက်စကားဝိုင်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေ။
"အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်သက်သေပြဝေးလံခေါင်ဖျားနဲ့စတူဒီယို applications များထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ဟာအရင်ကအများကြီးပိုကြီးတဲ့ဘဏ်ဍာအဘို့သိုထားသည့်အကြိမ်ရေနှင့် resolution နဲ့ Live Show များနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်နယ်ပယ်စျေးကွက်မှ၎င်းတို့၏လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့ဖို့ထုတ်လွှင့်အားဖွင့်ပါတယ်," Jorba ကဆက်ပြောသည်။
တိုက်ရိုက် Programming အဘို့သက်သေပြ
မကြာသေးမီ TVU Talkshow ၏ဥပမာထားပြီးအမေရိကန် Fox ကအဆိုးမြင်အန္တရာယ်နှင့် Sky Sports နှင့် '' ဥရောပအတွက်ဘောလုံးလူမှုပါဝင်သည်ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါက Sky Sports နှင့် '' တိုက်ရိုက်ဟောပြောချက်ကိုပြသ, ဘောလုံးလူမှု, TVU Talkshow ထံမှ bi-directional ဝေးလံသောပရိသတ်ကိုပါဝင်မှု feature ကိုအသုံးပြုပြီး 17 / 2018 ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအဘို့ထက်ပိုမို 2019 သန်းအွန်လိုင်းအမြင်များရောက်ရှိ youtube ကနဲ့ Facebook ပေါ်မှာထုတ်လွှင့်။ Fox ကအဆိုးမြင်အန္တရာယ်အသစ်တစ်ခုကို streaming ရုပ်သံလိုင်းအတွက်အာဖရိကန်အမေရိကန်အတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက် Los Angeles မြို့လည်းအစောပိုင်းအသုံးပြုသူဖြစ်ပါတယ်။
cloud-based TVU ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ, အမြန်ဖြတ်တောက်မှုစေဂရပ်ဖစ်ထပ်ထည့်သွင်း, မျိုးစုံသတင်းရင်းမြစ်များအကြား switch သည်, အသံဖိုင်စီမံခန့်ခွဲ, ပျေါလှငျနှင့် instant replays compile, Slow-motion ကလစ်များဖမ်းယူနှင့်တီဗီနှင့်အင်တာနက်နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာတွန်းအားပေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Visual ရေဒီယိုထုတ်လုပ်သူများချက်ချင်းအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းဖမ်းယူနိုင်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု၏ဖန်တီးမှုများအတွက်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု TVU ထုတ်လုပ်သူ၏အကျိုးကျေးဇူးများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ non-အမြတ်အစွန်းအုပ်စုတစ်စုသည် ဖောင်ဒေးရှင်းကရည်ရွယ်, အခြေခံအုတ်မြစ်၏အသိအမြင်တိုးပွားစေဖို့စမ်းချောင်း Facebook နှင့် Youtube ကိုအပေါ်နှစ်ခုဂန္ထဝင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲအသက်ရှင်ရန် TVU ထုတ်လုပ်သူကိုအသုံးပြုထားသည်။
TVU ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုစနစ် (RPS) တစ်ထုတ်လွှင့်မယ့်တည်ဆဲစတူဒီယိုထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်လယ်ပြင်ကနေအများပြည်သူအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အသုံးပြု. ကိုက်ညှိထားသော Multi-ကင်မရာဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ Up ကိုခြောက်ကင်မရာ feeds တွေကိုအလိုအလျှောက် On-site ကိုထုတ်လုပ်မှုကုန်တင်ကားသို့မဟုတ်ကြီးမားသောသမားတွေဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချပြန် IP ကိုကျော်စတူဒီယိုတစ်ခုဝေးလံခေါင်ဖျားတည်နေရာကနေညှိများနှင့်ကူးစက်လျက်ရှိသည်။ အယ်လ် Kamel စနစ်များ, အားကစားထုတ်လုပ်မှုအထူးကုထုတ်လွှင့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအသကျရှငျဦးဆောင်မော်တာ, ဝေးလံသောဆိုဒ်များကနေပြိုင်ကားဂရပ်ဖစ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ TVU RPS အသုံးပြုသည်။ ဘာစီလိုနာ, စပိန်, ကျင်းပခဲ့သောအဆိုပါ 2019 ကမ္ဘာ့ဖလားကြိတ်စက်အားကစားပြိုင်ပွဲမြို့ငါးမြို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောဝေးလံသောနေရာများကနေထုတ်လွှင့်ဖို့ TVU RPS ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ခြောက်လညှိအချက်ပြမှုများကိုဖြန့်ဖြူးဘို့, La Xarxa မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။
TVU ကွန်ယက် တကမ္ဘာလုံး 3,000 ကျော်ဖောက်သည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ TVU ကွန်ယက် IP ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏မိသားစုထုတ်လွှင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအွန်လိုင်း, ထုတ်လွှင့်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့အစွမ်းထက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်းအသွားအလာပေးသည်။ TVU အများအပြားအဓိကမီဒီယာကုမ္ပဏီ၏စစ်ဆင်ရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်၏ suite ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအိုင်ပီ, ဆည်းပူး transmit, ထုတ်လုပ်ရန်, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့အသုံးပြုထားပြီး HD သတင်း, အားကစားနှင့်အဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ရိုက်ကူး။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.tvunetworks.com.
2019 IBC ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC ပေါင်းစည်းမှု တိုက်ရိုက်အားကစား မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး SJGolden - လှံ & Arrows အားကစား စာတန်းထိုး စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-04
ယခင်: Music ကိုစတင်ထုတ်လုပ်မှုဂီတစာကြည့်တိုက်မြည်
နောက်တစ်ခု: FOR-တစ်ဦးက IBC 2019 မှာ Shine မှ Hybrid ကိုအိုင်ပီ / SDI စနစ်များ